“Inyaniso Iya Kunikhulula”​—Kucaciswa UYohane 8
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUrdu IsiUruund IsiUzbek IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Ngenye imini eYerusalem uYesu wayethetha ngoYise, uYehova, yaye ebhenca iinkokeli zonqulo lobuxoki zemihla yakhe. (Yohane 8:12-30) Oko wakuthethayo ngeso sihlandlo kusifundisa indlela yokuhlolisisa iinkolelo ezithandwayo ngoThixo kwimihla yethu. UYesu wathi: “Ukuba nithe nahlala kulo izwi lam, ngokwenene ningabafundi bam, niya kuyazi inyaniso, yaye inyaniso iya kunikhulula.”—Yohane 8:31, 32.
‘Hlala kulo izwi lam.’ Apha uYesu usibonisa indlela esinokwazi ngayo enoba iimfundiso zonqulo ‘ziyinyaniso’ na. Xa usiva kuthethwa ngoThixo, zibuze, ‘Ngaba oku kuyavisisana namazwi kaYesu kunye nazo zonke iZibhalo Ezingcwele?’ Xelisa umzekelo wabo beva umpostile uPawulos ethetha baza ‘bazincina ngenyameko iZibhalo mihla le mayela nokuba zinjalo kusini na ezo zinto [ababezifunda].’—IZenzo 17:11.
UMarco, URosa, noRaymonde, ekuthethwe ngabo kwinqaku lokuqala bahlolisisa iinkolelo zabo ngokufunda iBhayibhile namaNgqina kaYehova. Bafunda ntoni?
UMarco: “INgqina elalisifundisa iBhayibhile laphendula yonke imibuzo esasinayo nomkam ngeZibhalo. Saya simthanda ngakumbi nangakumbi uYehova, satsho sathandana nangakumbi nomkam!”
URosa: “Ekuqaleni, ndandicinga ukuba iBhayibhile yincwadi ebhalwe ngabantu esichazela ukuba inokuba unjani uThixo. Ndaya ndizifumana iimpendulo zeBhayibhile kwimibuzo endandinayo. Ngoku, uYehova ngumntu wokwenene kum. NguMntu endinokumthemba.”
URaymonde: “Ndathandaza kuThixo ndicela andincede ndimazi. Kungekudala emva koko, mna nomyeni wam saqalisa ukufunda iBhayibhile. Ekugqibeleni, safunda inyaniso ngoYehova! Asinawo amazwi okuchaza indlela esavuya ngayo sakuva uhlobo loThixo alulo.”
IBhayibhile ayibhenci nje kuphela ubuxoki ngoThixo; kodwa ikwachaza neempawu zakhe ezintle. IliLizwi lakhe eliphefumlelweyo yaye isinceda “sizazi izinto esizinikwe ngobubele nguThixo.” (1 Korinte 2:12) Kutheni ungazifundeli indlela iBhayibhile eyiphendula ngayo imibuzo eqhele ukubuzwa nebalulekileyo ngoThixo, injongo yakhe nekamva lethu? Funda iimpendulo zeminye yale mibuzo kwindawo ethi “Iimfundiso ZeBhayibhile > Imibuzo YeBhayibhile Iyaphendulwa” kwiwebhsayithi ethi www.jw.org/xh. Unokuzicelela nesifundo seBhayibhile kwakule Webhsayithi okanye kwiNgqina likaYehova. Siqinisekile xa usenjenjalo, uyakufumanisa kulula ukuthanda uThixo kunokuba wawucinga.